Kitra - V7V sy Matsiatra Ambony : Tontosa ny fifidianana ireo filohan’ny ligy -
AccueilVaovao SamihafaKitra – V7V sy Matsiatra Ambony : Tontosa ny fifidianana ireo filohan’ny ligy
23/10/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nizotra tamim-pilaminana ny fifidianana teo anivon’ireo ligim-paritra, Vatovavy Fitovinany (V7V) sy Matsiatra Ambony, eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra. Fifidianana izay hiatrehana ny fifidianana ho mpikambana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), ny 3 novambra izao.
Araka izany, lany ho filohan’ny ligin’i V7V, ny ben’ny tanànan’i Manakara, Adriano Giscar raha ramatoa Raby Eléonore kosa no lany teo anivon’ny ligin’i Matsiatra Ambony.
Tontosa omaly ihany koa ny fifidianana filohan’ny seksiona teo anivon’ny ligin’i Bongolava, ka lany hitantana ny seksion’i Tsiroanomandidy i Antoine Rajoroarisoa. Voalaza fa 14 tamin’ireo mpifidy no tonga nandatsa-bato tamin’izany, lany tamin’ny isam-bato 13 noho 1 ity farany. Araka ny fampitam-baovao, hotanterahina anio kosa ny fifidianana filohan’ny ligin’i Bongolava.
Ankoatra izay, tokony hotanterahina ny 27 oktobra teo ny fifidianana filohan’ny federasiona sy ireo mpikambana eo anivon’ny birao. Nahemotra ny 3 novambra izao indray izany. Marihina fa miisa sivy ireo kandidà mpifaninana ho filohan’ny FMF, ka anisan’izany ny filohan’ny federasiona mpisolo toerana, Doda Andriamiasasoa, ny filohan’ny federasion’ny kick-boxing teo aloha ary sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Paositra, i Briand Andrianirina, ny mpanohana sady nikarakara ny Barea de Madagascar, Lova Rasamimanana, ny minisitry ny Paositra teo aloha, Neypatraiky Rakotomamonjy, ny tale jeneralin’ny Cnaps, Raoul Rabekoto, Hery Rasoamaromaka, Jacques Ramarosoa, Roméo Bezamanifary, Alfred Randriamanampisoa.